Tarragona ho an'ny vehivavy: ny toetra mahasoa sy ny fanoherana, mety ho an'ny ahitra mandritra ny fitondrana vohoka, inona ny maha-tokana ny tarragona, izay ampiasaina amin'ny fitsaboana sy ny cosmetology? - Zavamaniry mihinana - 2019
Ireo toetra mahasoa sy ny fanoherana ny tarragona ho an'ny vehivavy. Ny fampiasana zavamaniry ao amin'ny cosmetology sy fanafody
Estragon, fantatra amin'ny anarana hoe tarragona, dia matetika mifandray amin'ny dite sy ny lemonade tsara, saingy tsy manimba ny fananana ilaina izany. Ny zavamaniry dia manana ny toetrany manokana amin'ny fitsaboana nentim-paharazana sy ny cosmetology.
Ny zavamaniry dia mitaky fangatahana fa tsy amin'ny fihinanana ihany, fa amin'ny resaka zava-mahadomelina sy ny cosmetology, izay tena sarobidy ho an'ny vehivavy.
Ny lahatsoratra dia manoritsoritra amin'ny antsipiriany ny toetra mahasoa sy ny fanoheran'ny tarragona ho an'ny vehivavy. Ny fitaovana koa dia ahitana ny fampahalalana momba ny fampiasana ny zavamaniry amin'ny cosmetology sy ny fanafody.
Misy fifanoherana ve ary mety ho bevohoka ianao?
Ny fampiasana taratra amin'ny fitsaboana nentim-paharazana
Famaritana ny vanim-potoanan'ny ratra sy ny asan'ny tovovavy
Manohitra ny tsy fandriam-pahalemana
Ny fampiasana zavamaniry ao an-trano
Manatsara ny fahasalamana
Manatsara ny fahasalamana amin'ny tsimokaretina
Inona no ilain'ny tarragona?
Estragon amin'ny fampiharana tena izy dia mahasoa ho an'ny lahy sy vavy, satria mety ho toy ny fanafody fanariana anteriora, mamoafady, manintona, manohitra ny fanafodiny, fanafody ary antiviral.
Ny zazavavy Tarragona dia tena mahaliana amin'ny maha-mpanampy azy amin'ny ady amin'ny fiovàna mifandraika amin'ny taona sy ny singa manan-danja amin'ny famokarana zavatra ho an'ny fikarakarana ny hoditra amin'ny tarehy sy ny vatana.
Ny Estragon dia azo raisina ho toy ny fomba hanatsarana ny asan'ny fananganana fiovan'ny tovovavy, ny gonads ary ny fanarenana ny tsingerina. Indrindra fa ny fanampian'ny zavamaniry dia mahatsapa amin'ny trangan-tsakafo na maharitra. Ankoatra izany, ny zavamaniry dia hanampy amin'ny fanafoanana ny fanaintainana ao amin'ny kibon'ny ambany sy ny tsy fahampian-tsakafo mandritra ny fotoan-tsarotra. Nefa mandritra ny fitondrana vohoka sy ny fihomehezana dia tsy azo ekena ny fametrahana ny tarragona.
Ny Estragon dia manana firaiketam-po tsy manam-paharoa, miaraka amin'ny mineraly, vitamins ary biby enzymes manokana Isaky ny 100 gr of tarragona maintin'ny kafe:
Calorie content 295 kcal
proteinina 22.77 g
menaka 7.24 g
gliosida 42.82 g
Fiantohana ny sakafo 7,4 g
lavenona 12.3 g
rano 7.74 g
Ny votoatin'ny vitamina isan-karazany amin'ny zavamaniry:
Retinol (A) 0.21 ml
Ascorbic acid (C) 50 ml
Thiamine (B1) 0.25 ml
Riboflavin (B2) 1.34 ml
Pyridoxine (B6) 2.41 ml
Asidra folaka (B9) 0,274 ml
Asidra Nicotinic (PP) 8.95 ml
Sakafom-borona isan-karazany ahitra:
Potassium (K) 3020 mg
Phosphorus (P) 313 mg
Iron (Fe) 32.3 mg
Manganese (Mn) 7.97 mg
Copper (Cu) 0.68 mg
Selenium (Se) 0.0044 mg
Zinc (Zn) 3.9 mg
Azonao atao ny manoro an'i Tarragona amin'ireo izay maniry:
Ampaherezo ny taolana.
Hanatsara ny firaisana ara-nofo.
Ario ny adin-tsaina sy ny fanahiana ary avereno torimaso tsara.
Hamafiso ny fiarovana.
Hanatsara ny asan'ny trakta ao amin'ny gastrointestinal.
Ampiheno ny tsindry
Ampitomboy ny fialan-tsasatrao.
Hanatsara ny fatran'ny voa.
Esory ny fihinina.
Hamafiso ny endrikao.
Arovy ary manamafy ny rindrin'ny sambo.
Ataovy ambany ny siramamy ao amin'ny vatana.
Arosoy ny parasy.
Ampitomboy ny isan'ny sela mena.
Manaova ny fomba fiasan'ny tendon-tsiriry sy ny sisa.
Amin'ny ankapobeny, ny tarragona dia mahasoa fotsiny, fa amin'ny toe-javatra sasany, ny fampiasana azy dia tsara kokoa ny mandà:
Miaraka amin'ny tsy fandeferana tsirairay amin'ny tarragona ary ny fisian'ny fanehoan-kevitra mahakasika azy.
Raha misy aretina ao amin'ny taratasy mivalona amin'ny gastrointestinal (gera, gastritis, asidra be dia be, sy ny sisa).
Tsy azo atao ny maka ny tarragon ao amin'ny vehivavy bevohoka, satria ny zavamaniry dia mandrisika ny fadimbolana ary mety hiteraka fiovana.
Tarragona ho an'ny tanjona ara-pitsaboana dia azo ampiasaina amin'ny endriky ny dite, siropo, kvass, fandroana ary fampidirana. Ohatra, ny solosaina sasany dia homena amin'ny fanafoanana ny olana ara-pahasalamana amin'ny fampiasana an'io zavamaniry io.
Ny 20 gram of fresh tarragon dia tokony hifangaro miaraka amin'ny rano miboiboika 500 mln ary atambatra mandritra ny 20 minitra. Ny fanafody vokatra dia fanohanana ny aretin'ny voa. Mampiasà in-4 isan'andro, 100 ml, mandritra ny 3-4 herinandro.
Amin'ity tranga ity, ny dite dia manampy raha misy ronono kely misy menaka 1 litatra miala amin'ny ahitra 20 minitra. Na inona na inona ny teofilo an-tarragona, tapitrisa dite ny ginger dia alaina, ampiana siramamy ampiana, ary izany rehetra izany dia milatsaka rano 250-300 ml. Amin'ny antsasak'adiny dia ho vonona ny fisotroana.
Noho ny vokatra dièraika, mety hahasoa ny cystitis ny fomba ampiasain'ny tarragona sy ny ginger.
Afenina 1 santimetatra vita amin'ny fitaovana ahafahana mamoaka rano mangatsiaka ary manindry mandritra ny ora iray. Taorian'ny tebiteby mba haka intelo isan-andro, dia 100 ml.
Ny firafitry ny simika dia manome tarragona mpanampy lehibe amin'ny cosmetology.fa ny ankizivavy rehetra dia afaka ny hankasitraka ireo fitsaboana fisedrana amin'ny vatany.
Ny fonosana henna tsy misy loko dia mafana amin'ny rano mangatsiaka miaraka amin'ny tarragona. Rehefa mafana ny mari-pana amin'ny toetr'andro azo ekena, dia ampiana 3 dolara amin'ny solika ilain-drivotra ilana azy na alaina hafa. Ny saron-tava dia mihazona eo ambany loha eo amin'ny lohany mandritra ny iray minitra fara-fahakeliny, raha tianao, dia afaka matory miaraka aminy ianao. Avy eo dia misaraka amin'ny rano mafana, tsy misy shampoo.
Manoloana ny hoditra eo amin'ny tarehiny sy ny tendany, ny ranomandry avy amin'ny tarragona-ombivavy dia manampy tsara, ka mamela izany hanaloka sy hamantatra izany. Raha mahazatra sy maina ny hoditra, dia mila miala 2 teatran-doha amin'ny ravin'olon-trondro vaovao ianao na manondraka lasopy mafana amin'ny tarragona maina ary manodina azy ao anaty mosary.
Avy eo dia mifangaro amin'ny tsaramaso fary izy ary misy ampiana vitamin A ampiana, ary mampihena ny tavy ny tarehy. Amin'ny faran'ny 15 minitra, ny rehetra dia voasasa miaraka amin'ny rano mangatsiaka sy mangatsiaka.
Ao anatin'ny ady amin'ny fihanaky ny hoditra, misy sarontava misy latabatra roa misy tsaram-bary tarragona voatoto miaraka amin'ny menaka roa misy kefir tonga manavotra. Tokony ho eo amin'ny tarehiny mandritra ny 20 minitra ilay saron-tava, ary hosasana aloha amin'ny rano mafana ary avy eo amin'ny rano mangatsiaka mangatsiaka. Farany, nampiasaina ny mainty hoditra.
Sakafo karoka, tsaramaso mena fandevenana, mofomamy (sotrokely iray isaky ny iray litatra) ary bunch of tarragon dia hanampy amin'ny fanarenana ny hoditra ary hanome azy mamirapiratra. Ny fantson-drano dia vita amin'ny fantsom-pofona mangotraka amin'ny dite maitso. Rehefa afaka antsasak'adiny dia tokony hosasana amin'ny rano mangatsiaka.
Ny jiron'ny ahitra manjono dia manosika ny fanavaozana ny hoditra, ny fanasitranana, ny fiterahana ary ny fandoroana.
Ny menaka ivoara Tarragon mifangaro miaraka amin'ny valan-kôkôma dia mamelombelona, ​​mamirapiratra ary mandoko ny hoditra.
Ny fanosotra menaka tarhun miaraka amin'ny rano mangatsiaka, ary manampy ampongabendanitra roa eo ho eo, dia azonao atao tsara ny manasa lamba.
Toy ny azo takarina amin'ny voalaza etsy ambony, amin'ny fampiasana amim-pitandremana, ny tarragona dia tena zava-mahasoa tena ilaina amin'ny fisakafoanana, ny fitsaboana ary ny cosmetology. Ny zavatra manan-danja indrindra amin'ny fanarahana ny dosage dia mihevitra fa tsy azo ampiasaina amin'ny vehivavy mandritra ny fitondrana vohoka izany, ary koa ireo olona manana fanandramana hahazoana tarragon. Ny habetsaky ny bozaka ho an'ny olon-dehibe: fresh - 50 grama, maina - 5 grama, amin'ny endriky ny dite - 500 milliliter.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ireo toetra mahasoa sy ny fanoherana ny tarragona ho an'ny vehivavy. Ny fampiasana zavamaniry ao amin'ny cosmetology sy fanafody